Cajiib: Laba-sanno jir maalintii Qiijiya 40 xabbo oo sigaar ah | Xarshinonline News
Cajiib: Laba-sanno jir maalintii Qiijiya 40 xabbo oo sigaar ah
Hargeysa, (NNN)- Marka aad aragto sawirka ilmahan yar isaga oo gaadhi-caruureedkiisa isteerinka ku dhagan, Sigaarkana bafta ku haya, waxaa hubaal ah inaad u maleyn doonto darawal gaadhi xamuul oo gawaadhida caruurta ku ciyaaraya, laakiin wiilkan oo lagu magacaabo Ardi Rizal waa laba jir aad u jecel cabbista sigaarka.
Wiilkan oo ka soo jeeda koofurta Gobalka Sumatra ee dal Indonesia waxa uu cabbaa laba baako oo sigaar ah maalinkasta. Waqtigiisa inta badana waxa uu ku dul dhameystaa gaadhi-caruureedkiisa. Way yartay xili aanu Ardi dhuuqeyn sigaar, tani waa sababta keentay inuu kaligii dhaqaaqo waayo iskaba daa caruuurta filkiis ah inuu la cayaaree.
Hooyadii oo khaatiyaan ka taagan sigaar-cabbista uu wiilkeedu sabinimada ku bilaabay ayaa cadaadis ku saartay in uu joojiyo sigaarka, hayeeshee dadaalkaas kuma ay guulaysan, isaga oo Ardi bilaabay inuu ooyo madaxana darbiga la dhaco, wuxuu ku calaacalay in joojinta balwadan ay u keentay xanuun iyo wareer.
Ilmahan layaabka leh sigaarkasta iskama cabo ee waxaa jira nooc gaar ah oo ay xaraaraddu ugu baxdo. Waalidkii waxa ay maalinkasta sigaarkiisa ku kharash gareeyaan $5.50 (Shan iyo badh dollar). Halka ay hooyadii xusulduub ugu jirto in willkeeda yar uu joojiyo sigaarka, aabihii wuxuu qabaa in ilmahooda uu caafimaad qabo sabab looga joojiyo sigaarkana aanay meesha ku jirin.
‘Cimrigaaga oo dheeraada geel dhalaaya uu ku tusaa,’ ayay ahayd murti ay leeyihiin dadka ku nool Koonfurta Soomaaliya. Ardi wuxuu si fiican ugu xarragoon yaqaanaa sigaarka, waxaadna moodeysaa in uu yahay jilaa filim ku jilaya sigaarka.
Dowlada Indonesia waxa ay u yaboohday waalidiinta laba jirka sigaaryacabka ah Gaadhi cusub, waase hadii ay ilmhahooda ka dhaadhiciyaan in uu joojiyo balwadan. Waxa ay u muuqataa in waalidiintiisa aanay markan ku dhicin inay weydiistaan inuu joojiyo sigaarka, wayoo waa uu qabatimay.
Filed under caafimaadka, dhacdooyinka
← Beesha reer Shirdoon (Yoonis Nuux) oo Suldaan cusub caleemo-saaray
Daruuro ka samaysan ciidda duufaan ka dhacay lamadegaanka Gobi oo dul hoganaya tuulo ka tirsan Shiinaha →